CAJIIB!: Wariye Si Cilmiyaysan U Soo Bandhigay Fursada Boqolkiiba Ay Koox Kastaaba Isku Aadka Champions League Ku Wajihi Karto Kooxaha Kale. - Gool24.Net
CAJIIB!: Wariye Si Cilmiyaysan U Soo Bandhigay Fursada Boqolkiiba Ay Koox Kastaaba Isku Aadka Champions League Ku Wajihi Karto Kooxaha Kale.
Kubbada cagta aduunka ayaa sugaysa maalinta isniinta ee December 17 markaas oo la samayn doono isku aadka wareega 16ka Champions league waxayna haddaba koox kasta oo soo baxday ogtahay kooxaha ay ku aadi karto maadaama oo ay iska reebayaan kooxaha ay isku wadanka yihiin iyo kuwa ay isku groupka soo noqdeen isla markaana loo kala qaybiyay kaalinta kowaad iyo kaalinta labaad.
Laakiin wariyaha reer Spain ee Mister Chip oo aqoon u leh statakada iyo xogta ayaa soo bandhigay xog cilmiyaysan oo lagu qiyaasi karo boqolkiiba fursada ay koox kastaaba ku aadi karto kooxaha ay sharci ahaan tahay in lagu aadin karo waxaana ka soo baxday qiyaas aanu halkan idiinku faah faahin doono.
Kooxaha Ajax, FC Porto, Lyon iyo Schalke ayaa ah afarta kooxood ee ay koox kasta oo wayni ku riyoonayso in lagu aadiyo wareega 16ka Champions league laakiin kooxaha qaar ay isku kaalmo ku soo baxeen afartan kooxood ayaan wax fursad ah u haysan balse kooxaha kale laftooda fursada ayaa yar.
Aan marka hore sharaxno qaabka uu wariye Mister Chip xogtan ku diyaariyay oo ah laba qaybood, sida sawirka hoose kaaga muuqan karta, qaybta kor u taagan waxaa ku qoran magacyada kooxaha kaalinta kowaad kaga soo baxay guruubkoodii halka qaybta fiitka ama gudubka ah ay ku qoran yihiin kooxaha kaalinta labaad ku soo baxay.
Waxa kale oo muhiim ah in markii xogtan la qiimaynayay in la adeegsaday sharciga UEFA ee kala ilaalinaya kooxaha isku wadanka ah iyo kuwii isku groupka soo ahaa isla markaana ay isku beegmi karaan laba kooxood oo ku soo kala baxay kaalinta kowaad iyo kaalinta labaad.
Haddaba waa sidee fursada Boqolkiiba ay Kooxuhu Iskugu Aadi Karaan?
MAN CITY: Boqolkiiba 28.9% ayay Manchester City ku aadi doontaa kooxda Atletico Madrid waxaana ku soo xiga Schalke iyo Roma laakiin Man City ayaa fursada ugu yar oo boqolkiiba 19.97% ah ku waji doonta kooxda Ajax.
Tottenham: Spurs ayaa iyaduna fursad ugu badan ku wajihi karta Dortmund iyada oo boqolkiiba 17.217%.% ugu beegmi karta kooxda reer Germany waxayna kooxaha Real Madrid iyo Barcelona kala mid tahay Liverpool iyo Man United.
PSG: kooxda reer France waxay boqolkiiba 18.8% oo ah fursada ugu badan ku aadi kartaa kooxda Diego Simeone ee Atletico Madrid waxayna fursada ugu yar oo boqolkiiba 13.7% kula kulmi kartaa kooxda Ajax.
Juventus: Old Lady waxay fursada ugu wayn oo boqolkiiba 18.5 ah ay ku aadi kartaa kooxda Atletico Madrid halka sida PSG ay fursada ugu yara oo boqolkiiba 13% ah ay ugu aadi karto Ajax.
Riix Halkan 2 si aad dhamaan kooxaha waa wayn ee kale u akhrisato fursada isku aadkooda.